Sangano reVaimbove Varwiri veHondo yeRusununguko Ropatsanuka?
Chimwe chikamu cheZimbabwe National Liberation War Veterans Association mudunhu reHarare, chashora vamwe vaive varwiri verusununguko vari kuti hutungamiriri wesangano iri hubviswe.
Chikwata ichi chatiwo chinotsigira hurongwa hwehurumende hwekuripa varimi vachena vakatorerwa minda yavo sezvo hurongwa uhwu huri kuitwa pachitevedzwa bumbiro remitemo yenyika.
Sachigaro wesangano iri muHarare, VaSamuel Bhila, vati vanotsigira hutungamiriri hwaVaChris Mutsvangwa musangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, uye havabvumirane nechikwata chaVaEthan Matibela icho chakati VaMutsvangwa nevamwe vavo vabviswe.
VaBhila vati VaMatibela nechikwata chavo havasi nhengo dzeZNLWA uye havafaniri kunge vachitaura pamusoro pesangano iri.
VaMatibela nechikwata chavo avo vanoti ndevamwe vaivepo pakaumbwa sangano rinomirira vaive varwiri vehondo yerusununguko, vakaudza vatori venhau nemusi weChitau kuti sangano iri rakaumbwa kuti rigadzirise matambaudziko avo kuti vagare zvakanaka asi vakati izvi hazvisi kuitika nekuti hutungamiriri huripo hauna hany’a navo.
Pamashoko aVaBhila, VaMatibela vaudza Studio 7 kuti vaive varwiri vehondo yerusunguko vave kurwisaniswa nevamwe vanhu pachinhambo chekuti vashande pamwe kugadzirisa zvichemo zvavo.
VaBhila vatiwo havasi kufara neimwe nhengo yesangano ravo yechikadzi iyo yakabuda pamadandemutande svondo rino ichinyomba mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, ichiti vatadza kutonga nyika.
VaBhila vati vanoziva mudzimai uyu asi varamba kumudoma nezita vachiti havabvumirani nezvaanotaura.
Vatiwo vanotsigira chirongwa chehurumende chekuripa varimi vachena vakorerwa minda yavo sezvo chiri kuitwa pachitevedzwa bumbiro remitemo yenyika.
Asi chikwata chaVaMatibela hachisi kufara nechirongwa chekuripa varungu ichi cheGlobal Compensation Deed.
Pane chimwewo chikwata chinomirira vamwe vakarwa muhondo yerusununguko che War Veterans Pressure Group, icho chakatokwidza nyaya iyi kudare repamusoro chichida kuti chirongwa ichi chimiswe sezvo chichiti chinosarura kubhadhara vachena chichisiya vatema vemuno.
Patavabvunza pfungwa dzavo pamusoro pemutauro wasimudzwa nenyaya iyi munyika, mutungamiriri wesangano rinomirira varimivachena munyika reCommercial Farmers Union, VaAndrew Pascoe, vati vanofara kuti hurumende yakabvuma kuvabhadhara uye vari kuedza napose pavanogona kuona kuti mari yacho yawanikwa.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kuna VaMutsvangwa, kanaeo munyori mukuru wesangano ravo, VaVictor Matemadanda, kuti vanoti kudii nekudhonzerana masimba kwava kuitika musangano ravo.